NGAPHANDLE: Ukuvela kweefoto zikaMarco Rubio kwiHS 'Chippendales' yesiqhelo - Ezopolitiko
Eyona Ezopolitiko Ukuvela kweefoto zikaMarco Rubio oBamba njengoMfundi oPhakamileyo kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo
Ukuvela kweefoto zikaMarco Rubio oBamba njengoMfundi oPhakamileyo kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo
Ekupheleni kuka-Matshi, kwiiveki ezimbini phambi kokuba abhengeze ukuba ngumongameli, uMarco Rubio utyelele i-Upper West Side yesiXeko saseNew York ukuya kudibana nabantu abanemali kwaye ahambise incwadi yakhe entsha. Amaphupha aseMelika : Ukubuyiselwa kwamathuba oqoqosho kuye wonke umntu . Kwigumbi elihle elijonge iPaki kunye neMyuziyam yeMbali yezeNdalo, uMnu. Rubio wenza intetho ethandabuzekayo, ejija umongameli kwaye evakalisa umbono omanyeneyo, ngakumbi kwibala lomgaqo-nkqubo wezangaphandle. I-senator ehlakaniphileyo ehlekisayo evela eFlorida nayo ithathe imibuzo kuzo zonke izihloko, ichukumisa igumbi lama-elites anezithende, kunye neentatheli ezinje ngo-Bret Stephens noJohn Podhoretz, kunye nokuzithemba okumenze waduma njengoyena mnxibelelanisi ubalaseleyo kwiqela leRiphabhlikhi.
Unyana we-bartender kunye nomgcini wendlu owafuduka esuka eCuba, ibali lobomi likaMarco Rubio lifundwa njengento ephuma kwiintsomi.
Okungaziwa kancinci bubuchule bukaMnu Rubio njengomdlali we-burlesque.
Into oyibonayo apha ngezantsi ifoto evela kukhuphiswano lwetalente lonyaka weSikolo samaBanga aPhakamileyo iSouth Miami.
Igama lesidlaliso seqela UMzantsi Miami weSikolo samaBanga aPhakamileyo , apho uMnu Rubio waphumelela khona ngo-1989, yayinguCobras. Qho ngonyaka bekukho ukhuphiswano lwetalente eyindoda kuKing Cobra kwaye ngo-1989, uMnu Rubio kunye nabanye abadlali beqela lakhe lebhola ekhatywayo babesothusa isihlwele ngomdlalo wokudanisa wohlobo lweChippendale. Nguye lowo phambi kwe-O eCobra kunye ne-washboard abs (yitya intliziyo yakho, Aaron Schock!). UMarco Rubio kunye nabo afunda nabo babanga isihloko seKing Cobra eSouth Miami Senior High.
Kwincwadi yakhe yokuqala, Unyana waseMelika , Mnu Rubio uxoxa ngomncintiswano weKing Cobra-kodwa hayi lo. Ebalisa indlela awayecula ngayo uLionel Ritchie elila nangoku, uMnu Rubio uxela ukuba wayenelizwi eliculekileyo lokucula kwaye ke wagqiba kwelokuba acule inombolo yakhe endaweni yesipiniki somlomo. Ukuhleka, ndamkela ubuntu obuntununtunu braggadocio. Ndazulazula ndajikeleza iqonga, ndasineka, ndaphosa umbhobho wam ndaza ndemka emva kokuba ndigqibile ingoma. Abahlobo bam bafumana ihlaya. Iijaji khange zenze -Ndivote okwesibini ukuya ekugqibeleni. Ukusebenza kweChippendales akuzange kuyenze imemori.
Nabani na okhe wabona i-ESPN 30 yamaxwebhu angama-30 u-U uyazi ukuba iMiami kwi-80s yayiyimbiza yokuhlangana kweendlela zaseMelika. Izidubedube zobuhlanga kunye nokusetyenziswa okubonakalayo kufunyenwe indlela yabo kumabonakude ngeMiami Vice kunye nenkcubeko yemali elula yeebhondi kunye necocaine yaboniswa nakwiSMSH.
I-SMSH yayineekota ezintathu ze-Hispanic, ngokwe Ibali leNyoka , iphephandaba lesikolo. UMnu Rubio, esandula ukufudukela eMiami esuka eLas Vegas, waziva engekho ndawo kwisixeko esasiphuphuma ngumdla wezopolitiko waseMariela kunye nokugqitha kweminyaka yama-80s. Ngoku ka Ukunyuka kukaMarco Rubio , nguManuel Roig-Franzia, ikhava yencwadi yesikolo ibonisa imvumba ebhijelweyo ibambe iibhili zeedola ezili-100 kumsila wayo. Injongo yomzimba womfundi yayikukuphumelela iJackpot.
UMnu Rubio akazange afune i-jackpot. Njengomntu ongaphantsi kodwa okhuselayo okhawulezileyo kwiqela eliphambili leSMSH, uMnu Rubio waphulukana nendawo yakhe yokuqala kwiqela elalikhawuleza. Kwesinye seziganeko zakhe ezinyanzelisayo, uMnu Rubio uchaza indlela abanye abadlali beSpanishi abazama ngayo ukumncoma ngokucebisa ukuba uMnu Rubio enze inyama yenkomo kunye nomqeqeshi, abaye batyhola ngokuthanda abantwana abamnyama.
Ibindim kuphela umntu ongengowase-Afrika oqala ukuzikhusela kwiCobra, kwaye ingomnye wabaqalayo abathathu abamhlophe kwiqela. …. [kodwa] bendithathelwe indawo ngumntwana omkhulu, onamandla kwaye okhawulezayo owenza imidlalo emininzi kunam. Yiyo kuphela into eyayikho kuyo.
Sele enezakhono zobunkokeli, wachukumisa iscout ngokwaneleyo ukuba afumane imali yokufunda eTarkio College kwilali yaseMissouri.
Ngaphandle kokusebenza kwakhe ngaphandle kwehempe, uMarco Rubio akazange aphumelele uKing Cobra. Kodwa isihloko sahlala kusapho. UCarlos Ponce, umdlali we-Puerto Rican kunye ne-balladeer, uphumelele isithsaba. Kamva watshata nodadewabo kaMnu Rubio uVeronica.
Eyona Oyile i-CBD ilungileyo yokuthengisa: Uphengululo oluPhezulu lweBrand
Ukutshintshwa kweRadiant 'Umbala oMfusa' kubetha iNqanaba leBroadway
Xa sele uyifumene, Yivume! Abavelisi ngoyena Mboniso ubalaseleyo!
Indoda engagungqiyo enomsindo uGordon Ramsay Ukhale ngaphezulu kwe-NYC Michelin Downgrade
Iindleko zokwenza abaphindezeli kwimfazwe engapheliyo
ndifuna ukubona ispiderman
ixabisa malini ngenyanga?
iincopho zamawele ixesha loku-1 isiqendu 6
yayingu john malkovich esisimumu